FAMPIELEZAN-KEVITRA : Mila tandrovina ny lalàna mifehy ny fifidianana loholona – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 1:43
« Tsy andeferana ireo mikasa hanakorontana », hoy ny avy amin’ny Mpitandro filaminana.
Accueil/Songadim-baovao/FAMPIELEZAN-KEVITRA : Mila tandrovina ny lalàna mifehy ny fifidianana loholona
FAMPIELEZAN-KEVITRA : Mila tandrovina ny lalàna mifehy ny fifidianana loholona
Hotontosaina manomboka amin’ity anio ity ny fampielezan-kevitra, momba ny fifidianana loholona, amin’ny 11 desambra hoavy izao. Mila tandrovina ny lalàna mifehy ny fifidianana, hisorohana ny mety ho fampiatoana ireo kandidà mihoa-pefy mandritra ny fotoan’ny fampielezan-kevitra…
Rado Harivelo 19 novembre 2020
Ny mpampaka-teny eo anivon’ny Ceni, Fano Rakotondrazaka.
Hisokatra amin’ity anio ity, ny fampielezan-kevitra momba ny fifidianana loholona, izay hotanterahina ny 11 desambra 2020, araka ny tetiandro navoakan’ny Vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana na ny Ceni. Ho tonga hatramin’ny fanatsoahana ilay kandidà tsy ho afa-mirotsa-kofidina ny tsy fanajana ny fepetra, momba ny lalàna mifehy ny fampielezan-kevitra. Tsy azo ataon’ny kandidà, araka izany, ny fampiasana ny fahefam-panjakana na ny fitaovam-panjakana mandritra ny fotoana ny fampielezan-kevitra. Tokony ho samy hanaja ny fepetra avokoa ireo kandidà hifaninana. Raha misy ny tsy fanarahan-dalàna, ho tonga hatramin’ny fampiatoana ilay kandidà. Nambaran’ny mpampaka-tenin’ny Ceni, Fano Rakotondrazaka fa « ireo lisitra ofisialy dia ekena avy hatrany, ary mahazo alalana hanao ny fampielezan-kevitra, mandritra ny 21 andro ». Nasongadiny, fa mila tandrovina ny lalàna mifehy ny fifidianana, izay manoro ny tokony hatao sy ny tokony hohajaina. Ho an’ny fihoaram-pefy amin’ny fandikana ny didy aman-dalàna, izay hanatanterahina ny fifidianana, dia misy ny Fitsarana mahefa, dia ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana.
Misy ny fandaminana tsy maintsy apetraka eo anivon’ny Fitandroana ny filaminana, amin’ny alalan’ny OMC, mba hananana fitoniana amin’ny fiatrehana ny fifidianana. Efa handraisana fepetra ny hahafaha-manatontosa ny fifidianana antsakany sy andavany, raha ny nambaran’ny Jly Andrianjanaka Njatoarisoa, nisolo tena ny Fitandroana ny filaminana, omaly. Misy ny hetsika atao mialoha ny fifidianana, mandritra ny fifidianana ary aorian’ny fifidianana, izay efa voafariparitra avokoa. « Ny any anivon’ny Faritra, sy eny anivon’ny Distrika, izay hisy ny fifidianana rahateo, dia efa samy nahazo ny baiko tandrify azy avy, mahakasika ny hetsika rehetra izay hatao, mandritra ireo fotoana telo izay voalaza ireo. Noho izany, dia te hiantso ireo mpifidy vaventy izahay, mba ho tony, ary raha misy ny zavatra mampiahiahy, na fampitahorana manjo an’izy ireo, mba hanatona haingana ny mpitandro filaminana, na eo anivon’ny Zandarimariam-pirenena, na eo anivon’ny Polisim-pirenena, na ny Tafika », hoy izy. Nanteriny fa tokony hanatona ao anatin’ny fotoana haingana, mba hahafahana mandray ny fepetra tandrify, mahakasika izany. Ny zava-dehibe, amin’ny mpitandro filaminana, dia ny hahafahan’ireo mpifidy vaventy manatontosa ny adidy araka ny tokony ho izy ary tsy misy teritery, na ho voasakana araka ny fanatanterahana izany fifidianana izany. Tsy niolaka ny Jly Andrianjanaka Njatoarisoa Kaomandin’ny zandarimariam-pirenena nilaza fa malalaka ny fanehoan-kevitra, saingy ny fambolena korontana kosa, tsy hoekena velively ary tsy handeferana mihitsy.
KAOMININA TSIAFAJAVONA: Vita ny asa fanavaozana ny tsena
FIATREHANA NY CEPE : Mpiadina miisa 269 nisitraka fitaovam-pianarana avy amin’ny Antoko Freedom
MPIANATRA MOZIKA, HIRA, DIHY… : Tanora 163 notoloran’ny minisitera mari-pankasitrahana